पुरुषलाई पनि हुन्छ मेनोपज, जानौँ! लक्षण, कारण र उपचार « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७८, ७ श्रावण बिहीबार १४:२५ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । महिलामा हुने मेनोपज (रजोनिवृत्ति) को अवस्थाबारे धेरैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ । नेपाली समाजमा मेनोपजलाई महिनावारी सुक्नु, नछुने नहुनु, बुढ्यौली लाग्नु आदि शब्दले बुझ्ने गरिन्छ । महिलालाई जस्तै पुरुषलाई पनि मेनोपजको लक्षण देखिन्छ भन्ने सुन्दा तपाईं पत्यार नलाग्न सक्छ । सरल भाषामा यसलाई पुरुषको मेनोपज वा रजोनिवृत्ति पनि भन्ने गरिन्छ।
उमेर बढ्दै गएपछि पुरुषमा पनि यस्तो परिवर्तनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरुषको यस्तो समस्यालाई वैज्ञानिक भाषामा एन्ड्रोपज भन्ने गरिन्छ। जुन उमेरसँगै हुने परिवर्तन हो। यस अवस्थामा पुरुषहरूमा भावनात्मक र शारीरिक परिवर्तन आउने गर्दछ र महिलालाई जस्तै यो क्षण पुरुषको लागि कठिनाइ हुने गर्दछ।
पुरुषमा यो अवस्था महिलाहरुमा जस्तै प्रजनन क्षमतामा समाप्त भएपछि नभएर बढ्दो उमेरको साथमा आउने हो र उमेर बढ्नेक्रममा यो पनि बढिरहन्छ। पुरुषमा यस्तो समस्या टेस्टोस्टेरोन तथा एन्ड्रोजेन हर्मोनको कमिले आउने गर्दछ। बढ्दो उमेरका कारण पुरुषहरुमा यस्ता हर्मोन्सहरु घट्दै जाने गर्दछन।
टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादनमा गिरावट आउनाले पुरुषमा यस्तो समस्या देखिन थाल्छ। जुन सामान्यतया ५० वा सो भन्दा बढी उमेर भएका पुरुषहरुमा देखापर्छ। पुरुषको रजोनिवृत्ति धेरै तरीकाले महिला रजोनिवृत्ति भन्दा भिन्न र फरक हुन्छ ।
बढ्दो उमेरसँगै पुरुषको शरीरमा हर्मोनको स्तरमा उतारतढाव हुन थाल्दछ । जसरी महिलामा मेनोपज सुरु हुने बेला एस्ट्रोजन हर्मोनको मात्रामा कमी आउँछ त्यसरीनै पुरुषको शरीरमा पनि टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कम हुन थाल्दछ ।
सामान्यतया ३० वर्ष कटेपछि पुरुषको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कम हुन थाल्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
पुरुषमा मेनोपजका लक्षण
शरीरमा इनर्जी कम हुने, छटपटी, यौन शक्तिमा कमी, शरीरको तौल बढ्ने, मुड स्विंग (मुड परिवर्तन), उदास, हर्मोन असन्तुलन, निन्द्रा नलाग्ने आदि पुरुषमा देखिने मेनोपजका लक्षणहरु हुन ।
किन हुन पुरुषलाई मेनोपज ?
चिकित्सकका अनुसार ३० वर्ष पुगेपछि प्राकृतिक रुपमा पुरुषको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कम हुन थाल्दछ । ८० वर्षको उमेर सम्म घटबढ हुने क्रम चलिरहन्छ । यसका अलवा अन्य कारण जस्तै मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका पुरुषमा मेनोपजको समस्या देखिन सक्छ । त्यस्तै गरि
मोटोपना भएको पुरुषमा पनि मेनोपजको लक्षण देखिन सक्छ । साथै कुनै औषधि सेवन गरिहेका पुरुषहरुको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादनमा कमी आउन सक्छ ।
टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले के काम गर्छ ?
टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले पुरुषको लिंग र वृषणको विकास गर्ने, दाह्रीजुंगा उमार्ने, मांशपेशीको विकास गर्ने, विर्य उत्पादन गर्ने, शरीरमा रातो रक्तकोषिका बृद्धि गर्ने र मस्तिष्कको कार्य सुधार गर्ने लगायत विविध काम गर्दछ ।
पुरुष रजोनिवृत्तिका लक्षणहरूको लागि उत्तम उपचार भनेको स्वस्थ जीवनशैली हो जसका लागि पुरुषहरुले नियमित व्यायाम, ध्यान, तथा स्वास्थ्य खानेकुराको सेवन गर्नु पर्दछ। त्यसगरी, तनावको अवस्थालाई आफुबाट टाढा राख्नु र आनन्दमय निन्द्रा नै यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
कम उमेरका पुरुषमा हर्मोन कम हुने र मेनोपजको लक्षण देखियो भने तुरुनै चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्दछ । प्राय मेल मेनोपजको केसमा त्यति उपचारको आवश्यकता पर्दैन । तर, कम उमेरका पुरुषमा मेनोपज हुन थाल्यो भने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस्मेन्ट थेरापी उपचार विधि अपनाउन सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन । यो उपचार विधि अत्यन्तै कम व्यक्तिलाई मात्र दिइन्छ । किनकी यसका धेरै साइडइफेक्टहरु छन । जस्तै मुटुरोग, उच्च रक्तचाप आदि । यदि कम उमेरमा मेनोपजका लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्दछ । (एजेन्सीको सहयोगमा) स्रोतः onlymyhealth